अमेजन कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न उत्तम अवसरहरू के हो?
यदि तपाईं आफ्नो व्यापार अमेजनमा चलाउनुहुन्छ भने, यो आवश्यक खोजशब्द अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। तपाईंले खोज्नु भएको लक्षित लक्षित सर्तहरू, तपाईले अमेजन SERP मा रेट गर्नुहुनेछ र अधिक कार्बनिक ट्राफिकमा तपाईलाई आकर्षित गर्नेछ। तपाईंको स्थानमा सबैभन्दा सान्दर्भिक खोजी सर्तहरूको आकलन गर्न तपाईँको समयको अन्वेषण गर्नुहोस् तपाईंको व्यवसाय क्षमतालाई अधिकतम र अमेजनमा सबैभन्दा खोजी खोजी सर्तहरूको लागि आफ्नो उत्पादन पदहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यो पर्याप्त छैन कि तपाईको व्यापार खोजी सर्तहरूको लागि उपयुक्त भेट्टाउन; तपाईंलाई पनि सामरिक रूपमा उनीहरूको प्रयोग चाहिन्छ। अमेजनले तपाईंलाई यो अवसर प्रदान गर्दछ।
कम्तीमा तीन सेक्शनहरू छन् जहाँ तपाई आफ्नो लक्षित कीवर्डहरू - शीर्षक, वर्णन र बुलेट बिन्दुहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै तत्वहरू केही क्षमतामा आवश्यक छन्, तर सूचीबद्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अधीनता पक्ष उत्पादको शीर्षक हो। यो लिस्टिंगको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रैंकिङ पावर छ। यदि तपाईंसँग शब्दकुञ्जी-पहुँच शीर्षक छ भने, तपाईं धेरै खोजी प्रश्नहरूको लागि श्रेणीमा सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंले शायद शायद अमेजनमा लम्बाई र कीवर्ड भरिएको उत्पादन शीर्षकको साथ उत्पादन सूचीहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। एक नियमको रूपमा, यस्ता शीर्षकहरूले अजयमा छोटो र सटीक भन्दा राम्रो रेट गर्छ। यहाँ हामी अमेजन र Google अनुकूलन पहलुहरु बीच एक ठूलो अंतर देख्न सक्छौं। Google मा तपाईंको शीर्षक निश्चित हुनुपर्दछ र तपाईंको वेबसाइट प्राथमिक विचारलाई राज्य बनाउनुपर्दछ, अमेजनमा तपाईंको शीर्षकले सम्भव छ कि तपाईंको उत्पादनको बारेमा धेरै जानकारी प्रस्तुत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा लामो वाक्य जस्तो गर्दैनन्, तर अमेजन ए9एल्गोरिदममा यो मूल्य पाउन सक्दछ। त्यसैले, कीवर्ड-अमीर शीर्षकहरूसँग, तपाईंको उत्पादन विभिन्न सान्दर्भिक खोज सर्तहरूको लागि अनुक्रमित गरिनेछ।
उत्कृष्ट शीर्षक हुनु आवश्यक छ, त्यो केवल युद्ध को आधा छ। यदि तपाईं कुनै लक्षित खोज सर्तहरूको लागि उच्च श्रेणी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, बिक्री अमेरीका देखाउनका लागि बिक्रीद्वारा चालु छ कि तपाईंको उत्पाद सूचीकरण यी खोज सर्तहरूका लागि धेरै उपयुक्त छ। यसैले यस लेखमा हामी व्यावसायिक तरिकामा कीवर्ड अनुसन्धान कसरी बनाउने र छलफल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको अमेजन लिस्टलाई सकेसम्म धेरै सक्षम बनाउनेछौं।.
अमेजन खोजशब्द अनुसन्धान र सूची अनुकूलन
सांख्यिकीय डेटा को अनुसार, सबै उत्पादन को खोज को एक तिहाई अमेजन ट्रेडिंग मंच मा शुरू हुन्छ। यो लाखौँ विभिन्न उत्पादनहरूसँग एक धेरै भीड र प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्म हो। यसैले ब्राउज गर्न र नयाँ उत्पादनहरू पत्ता लगाउन उत्तम ठाउँ होइन। अमेजन खोजहरूले सबैभन्दा सान्दर्भिक र उपयुक्त उत्पादनहरूको सूचीमा प्रश्नहरूको तुरुन्त परिणामको आशा गर्छन्। यही कारणले तपाइँका सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै पनि वाक्यांश खोजी गर्दा यो सूचीको शीर्षमा देखा पर्दछ।
धेरै आधारभूत सिद्धान्तहरूले तपाईंको समीक्षाहरूको मात्रा र गुणस्तर सहित, अमेजनको खोज परिणामहरूमा उच्च श्रेणीमा मद्दत गर्न सक्छ, तपाईंको अमेजन बिक्रीको इतिहास, राम्रो सम्झौताहरूको संख्या, तारा दर्जा, ग्राहक समर्थन, र तपाईंको कसरी प्रासंगिक उत्पादन खोज क्वेरीमा छ। जबकि यिनी पहलुहरु को समय र महत्वपूर्ण प्रयासहरु को आवश्यकता हो, तपाईंको Amazon सूची अनुकूलन को तुरुन्त तपाईंको नियंत्रण मा हुन सक्छ।
अमेजन सूचीबद्ध अनुकूलन को लागी कीवर्ड्स को कसरि खोज्नुहोस?
त्यहाँ सटीक खोजशब्दहरू को लागी केहि मात्रात्मक तरिकाहरू छन् जुन तपाईले तपाइँको सूचीमा समावेश गर्नुपर्दछ तपाईको प्रासंगिकता को सबै भन्दा सामान्य प्रश्न खोजी प्रश्नहरुको लागी अधिकतम।
त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् कि तपाई कसरी एक कीवर्ड अनुसन्धान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ - मैन्युअल रूपमा र स्वचालित रूपमा। अन्तिम संस्करण हाम्रो दिनमा प्रयोग गरिन्छ। यो धेरै समय बचत हुन्छ र व्यापक बजार आला अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धी विश्लेषणको आधारमा सबैभन्दा सही नतिजा प्रदान गर्दछ।
यसकारण म तपाईंलाई सफलतापूर्वक तपाईंको अमेजन अनुकूलन अभियान चलाउनका लागि व्यावसायिक स्वचालित सफ्टवेयर रोज्न सल्लाह दिन्छु। सबै भन्दा प्रभावकारी खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणहरूबाट, म निम्नहरूलाई गिन सक्छ - Google कुञ्जी शब्द प्लानर, अमेजन कीवर्ड प्लानर र जंगल स्कोउट।
. - aspire nautilus cage